Wiilka ugu yar caruurta Madaxweyne Qadaafi oo ku dhintay duqeyn diyaaradaha NATO – SBC
Wiilka ugu yar caruurta Madaxweyne Qadaafi oo ku dhintay duqeyn diyaaradaha NATO
Tripoli:-Afhayeenka rasmiga xukuumadda Libya ninka lagu magcaabo Muusa Ibraahim ayaa sheegay in Seyful Qadaafi oo ahaa wiilkii ugu yaraa caruurta madaxweynaha dalka Libya Mucammar Al-qadaafi uu ku geeriyooday weerar diyaaradaha dagaalka NATO ay la beegsadeen guri ku yaal Tripoli.
Afhyeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Madaxweyne Qadaafi uu ku sugnaa guriga balse uu ka badbaaday weerarkaas ay qaadeen isbahaysiga NATO.
Kadib markii uu soo baxay warka sheegaya in mid kamid ah caruurtii Qadaafi duqeyn lagu dilay waxaa magaalada Bangaazi ee ku taal beriga dalka Libya ka bilowday dabaaldag lagu soo dhoweenayo warkaas maadaama duqeyntaas lala damacsanaa in lagu dilo madaxweyne Qadaafi.
Jeneraal Shaar Booshaar oo ah amaanduulaha howlgalka NATO ee dalka Libya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka NATO ay beegsadeen goob lagu magcaabo Baab Al-casiisiya balse aysan xaqiijin Karin wararka sheegaya in duqeyntaasi uu kudhintay wiilka ugu yar caruurta Qadaafi Seyful Carab.
Sidoo kale Jeneraalku waxa uu carabaay in bartilmaadeedkoodu yahay saldhigyada melateri iyo goobaha istiraatiijiga u ah madaxweyne Qadaafi balse aysan doonayn in ay beegsadaan Qadaafi iyo caruurtiisa.